Edere site Tranquillus | Nov 3, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ezigbo onye isi ma ọ bụ nwanyị, ụmụ nwanyị na ndị nwe obodo, ezigbo onye isi, ezigbo onye ọrụ ibe… Ndị a bụ okwu ọma niile nke enwere ike iji malite a mail ọkachamara. Mana dịka ị maara, onye nnata bụ ihe na-ekpebi ihe. Ị chọrọ ịma koodu nkwanye ùgwù ka ị ghara ịkwụ ụgwọ maka nkwurịta okwu dara ada? N'ezie. Akụkọ a bụ maka gị n'ọnọdụ ahụ.
Usoro mkpesa: kedu ihe ọ bụ?
Oku ma ọ bụ ụdị mkpesa bụ ekele na-amalite akwụkwọ ozi ma ọ bụ ozi-e. Ọ dabere na njirimara na ọkwa nke onye nnata. A na-achọta ya n'akụkụ aka ekpe. Tupu a kpọwa aha mpịakọta, e nwekwara akụkụ a na-akpọ kpakpando.
Ụdị mkpesa: Ụfọdụ iwu izugbe
Usoro ịkpọ oku na-adịghị mma nwere ike imebi ọdịnaya niile nke email wee mebie onye zitere ya.
Iji malite, mara na mpempe akwụkwọ mkpesa enweghị mbiri ọ bụla. Nke a pụtara na mkpirisi mkpirisi dị ka "Maazị" maka Mr. ma ọ bụ "Ms." maka Nwada. Nnukwu ndudue bụ ide "Mr" dị ka mkpirisi nke okwu ọma ahụ "Monsieur".
Ọ bụ n'ezie mbiri okwu Bekee nke Monsieur. "M." bụ mkpọbiri ziri ezi na French.
Na mgbakwunye, ekwesịrị icheta na usoro nkwanye ùgwù na-amalite mgbe niile site na mkpụrụedemede ukwu. Rịkọm na-esote ozugbo. Nke a bụ ihe omume na koodu nkwanye ùgwù kwadoro.
Kedu ụdị mkpesa a ga-eji?
Enwere ụdị mkpesa dị iche iche. Anyị nwere ike ịkọwa n'etiti ndị a:
Iesmụ nwanyị na ụmụ nwanyị,
A na-eji usoro oku a na-akpọ "Madam, Sir" mgbe ị maghị ma onye nnata ya bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. N'ihe gbasara usoro ụmụnwaanyị na ndị nwe obodo, a na-ejikwa ya mgbe ọha na eze dị iche iche.
GỤỌ Email template maka arịrịọ na-ahapụ
Ihe dị na usoro a bụ na enwere ike dee ya n'otu ahịrị ma ọ bụ n'ahịrị abụọ dị iche iche ma na-ebuli okwu ndị ahụ elu, ya bụ site n'itinye okwu ndị ahụ n'okpuru nke ọzọ.
Usoro oku dị iche iche enwere ike iji:
Ezigbo onye ọrụ ibe,
Madam President na ezigbo enyi,
Dọkịta na ezigbo enyi,
Ọzọkwa, mgbe onye na-agwa okwu na-arụ ọrụ a ma ama, nkwanye ùgwù chọrọ ka e kwuo ya n'ụdị mkpesa. Nke a bụ otu anyị si enweta ụfọdụ usoro oku, dịka:
Ezigbo Onye Ozi,
Kedu ụdị arịrịọ maka di na nwunye?
Maka ihe gbasara di na nwunye, anyị nwere ike iji ụdị oku Madam, Sir. Ị nwekwara ike igosi aha mbụ na nke ikpeazụ nke ma nwoke na nwanyị.
Ya mere, anyị na-enweta usoro oku ndị a:
Mr Paul BEDOU na Oriakụ Pascaline BEDOU
Maazị na Oriakụ Paul na Suzanne BEDOU
Rịba ama na ọ ga-ekwe omume idowe aha nwunye tupu ma ọ bụ mgbe nke di.
Ozi ndị ọkachamara: Ụfọdụ iwu maka ụdị ịkpọ oku nkịtị Nọvemba 3, 2021Tranquillus
gara agaIhe nzuzo nke email mkpesa edere nke ọma
-esonụRelance France: ndị 500 ga-erite uru na nkuzi cybersecurity!